Indawo ye-Savannah, iDrax Hall Manor - I-Wifi YAMAHHALA, i-AC
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguLorenzo
Eli ligumbi lokulala elihle elinamagumbi amabini okuhlambela, igumbi lokuhlambela elitsha elisanda kuphuhliswa kwindawo ekhuselekileyo efudumeleyo nememayo. Lo mhlaba unokhuseleko lweeyure ezingama-24 kunye nokujikeleza rhoqo okuvela kwinkampani yokhuseleko ehlonelwayo. Unyaka wonke, iphuli yabantwana kunye nabantu abadala bakumgama wokuhamba wendlu. Kukwakho nendawo yokwenza umthambo exhotyiswe kakuhle, intenetya kunye nebala lebhola yomnyazi kunye nebala lokudlala labantwana. Indlu inescreen esisicaba seTV esine-WIFI yasimahla, iAmazon Fire Stick exhotyiswe ngamajelo angenamkhawulo kunye neeApps.
Ipropathi inoKhuseleko lweyure ezingama-24, iKlabhu yeLizwe eseMbindini eseMins kude eneGym enezona zixhobo zigqwesileyo, Indawo yokuqubha eneyabantu abadala kunye neyeyomntwana, Indawo yokudlala yabantwana ebandakanya izilayidi kunye nokujingi, ibala lentenetya kunye nebala lebhola yomnyazi. Kuba iOcho Rios iyindawo ethandwayo yabakhenkethi unokufikelela kwiindawo ezinomtsalane, iilwandle, Ukuthenga kunye neendawo zokuphumla.
Ubumelwane bucocekile buzolile kwaye bukhuselekile, Undwendwe lunokuziva lukhululekile ukwazi ukuba lukwindawo ekhuselekileyo kwaye aluyi kukhathazwa nangubani na, Ngelixa kwangaxeshanye lukwazi ukunxibelelana nabamelwane balapho ngamava okwenene eJamaica.
Umbuki zindwendwe ngu- Lorenzo